Zvakadii SEO Zvinodhura? | Martech Zone
Zvakadii SEO Zvinodhura?
China, January 5, 2012 Muvhuro, June 10, 2013 Douglas Karr
SEOmoz yakaburitswa data kubva pamusoro peanopfuura mazana mairi masangano anoita SEO kune avo vatengi AYTM akatora iyo data ndokuiisa mune infographic, Zvakadii SEO Zvinodhura?.
Imwe yekutora yaive yakanakisa kuona:
Kwakachena "SEO" vanachipangamazano / vamiririri vanogona kunge vachipera sekuwedzera "inbound kushambadzira" emafemu emasaiti (kupa SEO, zvemagariro, zvemukati, kutendeuka, analytics, nezvimwewo) simuka. Iyo data yakaratidza vanhu vakapindura zana nemakumi mashanu (150%) vachiti ivo vainyanya kutarisana neSEO apo imwe nhamba yakati kurei, 25 (160%), yakapa huwandu hwakazara.
Izvi zvakanaka kuona. Mukufunga kwangu, inbound Marketing agency ita basa riri nani kwazvo kuraira vatengi pakutsvaga injini yekutsvaga nekuti iwo mhedzisiro yebhizinesi-yakavakirwa pane kuseta-based. Kutarisa pachinzvimbo chete kunogona kutungamira kumatambudziko mazhinji… kusanganisira nekatsika kekuvimba nekudzosera kumashure, kusanzwisisa vateereri, uye kutarisa kune yakakwira vhoriyamu mazwi panzvimbo penzwi rakaderera, yakakwira kutendeuka mazwi akakosha.
Tags: atymmutengo we seoyakawanda zvakadii seoinbound Marketing agencymutengo we seoseoseomoz
Right Pane Inopindirana Yakatumidzwa Mutungamiriri muKushambadzira Mashini
Kuruboshwe maringe neRight Brained Marketers